TV-yada Soomaaliyeed: Taran Tayadoodu Taban Tahay-Qoraa Boobe. |
TV-yada Soomaaliyeed: Taran Tayadoodu Taban Tahay-Qoraa Boobe.
Waxaan jecelahay in aan halkan ku xuso dhacdo aanan dhaafi karin, in kasta oo aanay markii hore qayb
Wax badan ayay TV-yadu soo kordhiyeen. Waxaan is-leeyahay tebinta barnaamijyada Diiniga ahi waa kuwa ugu mudan. Waxa kale oo aan is-leeyahay haddii la is-yidhaahdo sii hagaajiya in wax badan laga qaban karo, gaar ahaan iyada oo la sii xulo culimada aqoonta iyo gudbinta ama tebinta fiican leh.
Waxa iyaguna wax-ka-soo-qaad leh barnaamijyo laga sameeyo magaalooyin ama degello Soomaaliyeed oo run ahaantii qaarkood xusuus gaar ah kugu reebayaan. Waxa kale oo aad ka ogaanaysaa horumarka ama dibu-dhaca degaankaa ku dhacay.